ကော်ဖီချစ်သူများနှင့် အသည်းခြောက်ရောဂါ | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
အထွေထွေ ရောဂါ နှင့် ဆိုင်သော အမေးအဖြေများ
အမျိုးသား နှင့် ဆိုင်သော အမေးအဖြေများ
အမျိုးသမီး နှင့် ဆိုင်သော အမေးအဖြေများ
ကိုယ်ဝန်ဆောင် နှင့် ဆိုင်သော အမေးအဖြေများ
ကလေးများ နှင့် ဆိုင်သော အမေးအဖြေများ
noname right first
noname right second
noname left last
ကော်ဖီ သိပ်ကြိုက်ပြီး တစ်ရက်ကို နှစ်ခွက်ထက် ပိုပြီးသောက်သုံးတတ်သူတွေမှာ အသည်းခြောက်ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုနှုန်း ၄၄ ရာခိုင်နှုန်း လျော့ပါးသွားပါသတဲ့။
ဒီထက်အံ့အားသင့်စရာက တစ်ရက်ကို သုံးလေးခွက်ထက် ပိုပြီးသောက်သုံးသူတွေမှာ အသည်းခြောက်နှုန်း ၆၅ ရာခိုင်နှုန်းထိ လျော့နည်းသွားနိုင်ပါတယ်။
>> အသည်းခြောက်ရောဂါဆိုတာ ...
● အကြောင်းတစ်ခုခု ရှိလာမယ်။ (အရက်စွဲတာ၊ အ၀လွန်တာ၊ အဆီဖုံးတာ၊ အသည်းပိုးဝင်တာ)
● ကာလရှည်ကြာ အသည်း ဒဏ်ပိမယ်။
● အမာရွတ်တွေ တည်လာမယ်။
● အသည်း လုပ်ဆောင်အားတွေ ကျဆင်းလာမယ်။
ဒီအချိန်မှာ လက်ရှိ တွေ့ရှိချက်က သုတေသီတွေကို အံ့သြသွားစေပြီး ကော်ဖီရဲ့အကျိုးအပြစ်တွေ လက်ရှိ တစ်ရက် ဘယ်နှစ်ခွက်သောက်သင့်တယ် ဆိုတာတွေကိုပါ ဆက်လက်သုတေသနလုပ်ဖို့ လိုအပ်နေတာကို ပြဆိုနေပါတယ်။
တစ်ဖက်က ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း အလွန်အကျွံဆိုတာ ဘယ်ဟာမှ မကောင်းတဲ့အတွက် ကော်ဖီ သိပ်သောက်လွန်းရင် -
● နှလုံးခုန် မြန်မယ်။
● ကိုယ်ခံအား ကျဆင်းမယ်။
● ကင်ဆာရောဂါတွေ ဖြစ်မယ်။
ဒါပေမဲ့ ကော်ဖီစွဲနေရင်တော့ သောက်သာ သောက်လိုက်ပါလို့ ပညာရှင်တွေက အကြံပြုကြပါတယ်။ ကော်ဖီဆိုတာ နောက်တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်လည်း ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေပါနေလို့ ကိုယ်ခန္ဓာအတွက် အားဖြစ်နေပါတယ်။
အလွန်အကျွံဆိုတာလည်း မကောင်းတဲ့အတွက် အသင့်အတင့်ပဲ သောက်သုံးခြင်းဖြင့် ဆိုးကျိုးတွေကိုပယ်လို့ သူ့ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကို အရယူလိုက်ကြရအောင် ကော်ဖီချစ်သူတို့ရေ ...။
ဂျီပီငှက် (ဆေး/မန်း) (www.drmyanmar.com)
ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါကို စနစ်တကျ ထိန်းထားနိုင်စေဖို့ ...
၂၅.၆.၂၀၁၉ | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
ပန်းနာရင်ကြပ်ဆိုတာက နာတာရှည်ရောဂါတစ်ခုပါ။ ကောင်းကောင်း ထိန်းထားနိုင်မယ်ဆိုရင် ပုံမှန်နေထိုင်နိုင်မှာပါ။ အောက်ပါအချက်တွေက ပန်းနာရင်ကြပ်ကို ကောင်းကောင်း ထိန်းမထားနိုင်ဘူးဆိုတာကို ပြပါတယ်။
● ချောင်းဆိုး၊ အသက်ရှူရင် အသံမြည်လို့ တစ်ညလုံး ကောင်းကောင်း မအိပ်ရခြင်း
နေမကောင်းရင် အိပ်ရာထဲ လှဲနေနော်
တစ်ကိုယ်လုံးလည်း အရမ်းနာကျင်ကိုက်ခဲ၊ လူလည်း မလှုပ်ချင်၊ စိတ်ဓာတ်လည်း ကျ၊ နေမကောင်း ထိုင်မသာ ညောင်းနေသူတွေအတွက် ပထမဆုံးလုပ်သင့်တဲ့ အသင့်တော်ဆုံးအရာက ဘာဖြစ်မလဲ ...
● ဆရာဝန်ဆီ ပြေးမလား?
● ပါရာစီတမော သောက်မလား?
● ဗီတာမင်စီလေး ဝါးလိုက်မလား?
နောက်ဆုံးရာသီ၏ ပထမဆုံးရက် *
အားလုံးDr. ဦးကံညွန့် (ပါမောက္ခ)Dr. ဦးကျော်ကျော်Dr. ဦးခင်မောင်လွင်Dr. ဦးခင်မောင်လွင် (FAME)Dr. ဦးချစ်စိုး (ပါမောက္ခ)Dr. ဒေါ်စုရီဌေးDr. ဦးစိုးလွင် (တွဲဖက်ပါမောက္ခ)Dr. ဦးစိုးဝင်းဦးDr. ဦးစောထွန်းအောင်Dr. ဇီဝတင်Dr. ဦးဌေးအောင်Dr. ဦးတင့်ဝေ (သွား/ကျန်းမာ)ဒေါက်ထွေး (ဆေး/မန်း)မောင်နေ (ဆေး-မန်း)Dr. ဦးနေ၀င်း (ပါမောက္ခ)Dr. ဒေါ်နီလာသိန်း (လင်းရောင်သစ်)Dr. ဒေါ်မီမီကိုDr. ဦးမိုးဝေမြင့်Dr. ဦးမောင်မောင်ညိုDr. ဒေါ်မြမြချယ်Dr. ဦးမြသိန်းဟန် (ပါမောက္ခ)Dr. ဦးမြင့်သန်း (ညောင်လေးပင်)Dr. ဦးမြင့်သန်းထွန်းDr. ဦးရဲသွင်Dr. ဒေါ်ရည်ညွန့်မေDr. ဦးလွင်သန့် (ဆေး - ၂)Dr. ဦးလွှမ်းမိုးဟန်Dr. ဦးဝင်းနိုင် (ပါမောက္ခ)Dr. ဦးသံစစ် (ပါမောက္ခ)Dr. ဒေါ်သန်းသန်းအေး (ပါမောက္ခ)Dr. ဦးသန်းအေး (ပါမောက္ခ)Dr. ဒေါ်အေးမြချယ်Dr. ဒေါ်အေးအေးဝင်းDr. ဦးအောင်ခင်ဆင့်
အားလုံးG6PD ချို့တဲ့ခြင်း (G6PD Deficiency)သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ (Dengue Fever)ကလေးနှင်းခူ (Baby Eczema)ကားမူးခြင်း (Motion Sickness)ကပ်ပါးပိုးတစ်မျိုးကြောင့်ဖြစ်သော ကူးစက်ရောဂါ (Toxoplasmosis)ကျောရိုးမကြီးတီဘီ (Spinal Tuberculosis)ကူးစက်မြန်ပြင်းထန် ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ရောဂါ (Neisseria Meningitidis ပိုး)ကျောက်ကပ်တွင်ကျောက်တည်ခြင်း (Kidney Stone)ခြေဖနောင့်အရွတ်ရောင်ခြင်းဂေါက်ရောဂါ (Gout)ငါးမျက်စိနှင့် အသားမာ (Corns & Calluses)ငှက်ဖျားရောဂါ (Malaria)ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ (Prostate Cancer)ဆီးထဲသွေးပါခြင်းဆီးမထိန်းနိုင်ခြင်း (Urinary Incontinence)ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်း (UTI)ဆီးအိမ်ကင်ဆာ (Bladder Cancer)ဇီကာရောဂါ (Zika)တီဘီ (TB)တုပ်ကွေးရောဂါ (Flu)ထိပ်ကပ်နာ (Actue Sinusitis)ဓာတ်မှန် (X-ray)နေ၀င်ရီတရောမှာခံစားရတဲ့ လက္ခဏာစု (Sundowner)နှလုံးကြီးခြင်း (Cardiomegaly)နှလုံးကြွက်သားများ စည်းချက်မမှန်ဘဲ လျင်မြန်စွာခုန်ခြင်း (Atrial fibrillation)နှလုံးညှစ်အား မကောင်းခြင်း (Heart Failure)ပါကင်ဆန်ရောဂါ (Parkinson's disease)ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါ (Asthma)မျိုးပွားအင်္ဂါရေယုန် (Genital Herpes)မျက်စိတိမ်စွဲရောဂါ (Cataract)ရာသီမလာခင် ခံစားရနိုင်တဲ့ လက္ခဏာစု (PMDD)ရင်သားကင်ဆာ (Ca Breast)ရုတ်တရက်ကျောက်ကပ်ကောင်းစွာ အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ခြင်း (Acute Kidney Failure)လေပွခြင်းနှင့် လေထိုးလေအောင့်ခြင်းလေဖြတ်ခြင်း (Stroke)လေဖြန်းခြင်း (transient Ischemic Attack)လေယာဉ်စီးချိန်တွင် ကြုံတွေ့ရသော နားပြဿနာများ (Airplane Ear)လိပ်ခေါင်း (Haemorrhoid / Pile)လည်ပင်းအရိုးကျီးပေါင်း (Cervical Spondylosis)လှုပ်ရှားလျှင် အသံမြည်သော တင်ပါးဆုံရောဂါ (Snapping Hip Syndrome)၀က်ခြံ (Acne)၀မ်းပျက်ဝမ်းလျှောခြင်း (Diarrhoea)သန္ဓေတည်စဉ်သွေးဆင်းခြင်း (Implantation Bleeding)သားဥအိမ်ကင်ဆာ (Ovarian Cancer)သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ (Cervical Cancer)သားအိမ်အတွင်းဆဲလ်များနေရာလွဲခြင်း (Endometriosis)သည်းခြေကျောက် (Gallstones)သွေးပေါင်ကျခြင်း (Hypotension)သွေးပြန်ကြောထုံးခြင်း (Varicose Veins)သွေးတိုးရောဂါ (Hypertension)သွေးလေးဘက်နာ (Rheumatoid Arthritis)သွေးလွှတ်ကြောပိတ်ဆို့ခြင်း (Arterial Thrombosis)သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ (Dengue Fever)သွေးအားနည်းရောဂါ (Anemia)အချင်းကွာကျခြင်း (Abruptio Placenta)အချင်းရှေ့ရောက်ခြင်း (Placenta Previa)အစာအိမ်ကင်ဆာ (Gastric Cancer/Stomach Cancer)အစာအိမ်ရောင်ရမ်းခြင်း (Gastritis)အဆုတ်ကင်ဆာ (Lung Cancer)အဆုတ်ရောင် နမိုးနီးယားရောဂါ (Pneumonia)အပူရှပ်ခြင်း (Heatstroke)အမျိုးအစား (1) သွေးချိုဆီးချိုရောဂါ (Type 1 Diabetes)အရက်သောက်ခြင်းကြောင့်မဟုတ်သော အသည်းအဆီဖုံးခြင်း (Non-alcoholic Fatty Liver)အရက်သောက်ခြင်းကြောင့် အသည်းခြောက်ခြင်း (Alcoholic Liver Cirrhosis)အရိုးပွရောဂါ (Osteoporosis)အမျိုးအစား (၂) ဆီးချိုရောဂါ (Type2Diabetes)အရိုးအဆစ်ရောင်ရမ်းခြင်း (Osteoarthritis)အသည်းကင်ဆာ (Liver Cancer)အသည်းရောင် အသားဝါ B ပိုး (Hepatitis B)အသည်းရောင် အသားဝါ C ပိုး (Hepatitis C)အာရုံစူးစိုက်မှုအားနည်းသောရောဂါ (ADHD)အီဗိုလာဗိုင်းရပ်စ် (Ebola)အူကျရောဂါ (Inguinal Hernia)အူမကြီးကင်ဆာ (Colon Cancer)အူအတက်ရောင်ခြင်း (Appendicitis)အယ်လ်ထရာဆောင်း (Ultrasound)
အားလုံးAllergyနှင့် နှာစေးပျောက်ဆေးTB ရောဂါကုဆေးကပ်ပါးရောဂါပိုးသတ်ဆေးစိတ်ကျစိတ်ကြွရောဂါကုဆေးစိတ်ကျရောဂါကုဆေးစိတ်ရောဂါကုဆေးများစိတ်ငြိမ်ဆေးဆီးဆေးနှလုံးဆေးနှလုံးသွေးကြောရောဂါကုဆေးပန်းနာရင်ကျပ်ပျောက်ဆေးဘတ်တီးရီးယားပိုးသတ်ဆေးမှိုပိုးသတ်ဆေးသွေးကျဲဆေးသွေးတိုးကျဆေးသွေးတွင်းအဆီကျဆေးသိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းဆေးအကိုက်အခဲနှင့်ကိုယ်ပူကျဆေးအစာအိမ်ရောဂါကုဆေးအရိုးပွရောဂါကုဆေးအိပ်ဆေးများ
အားလုံးAcnealAir – XAmlosunAscoril ExpectorantAsomex-ATAsomex-LTAtocorAtovaAvasAxcel Bromhexine ElixirAzotor EZAztorBetadayBigsens XRBioflorBiogurtBrainactBrupalCalcinol RBCardioprilCardivasCardura XLCarvidCarvidon/Carvidon MRCilzec / Cilzec plusCiproletCiticoCitopamClofen plusCoralanCordaroneCoveramCoversyl / Coversyl plusCyponDazolicDefluxDeriphyllinDerzid-CDerzid-NDiaboseDiamicron MR 30/60DiaprideDiclofenDigestineDilatrendDolfenalDuralyn-CRDurasalyn-CREnamEncorateEncorate ChronoEnzyplexEtoshineFinastFlixonaseFlixotideGABAGabatinGenozymeGinkanGranisetHaicnealHepaselImodiumIpramistIrbesar 150Irovel or Irovel HKonimagKremil-S/ Kremil-S ReformulatedLamitecLanzetLetrozLevometLipidanLive Up ComplexLivolin ForteLoritecLosacarMebiz SRMilan KitMonotrate or Monotrate ODMontekMoriamin ForteMotilium – MMusolNapaNasonexNatrilix SRNazolinNeopeptineNervolinNiseNormopressNorvascOditecOleanzOmezOptiumOsetronOxetolPantocid/ Pantocid DSRPiriton ExpectorantPlasmotrimPreteraxProlomet XLR-LOC 150Rablet – BRablet – DRelenzaRemopainRepace or Repace HRowacholRowatanalSelbexSeretideSermionSilkronSolmux BronchoSomprazSporacidStamloStrocainStugeronSylgan STanakanTarcevaTaverinTelcardTerbisilTopirolTot'hemaUlcemetUltracetUnima EnemaUnitaxelVastarel MRVentolinVoltex KoolWood’s peppermint Antitussive SyrupZeptol / Zeptol CRZifam TenovirZitam Ginkgo 3000ZoloftZosertZtorZycelZydesmoZyrtecZyvir
အားလုံးအလှအပနှင့်ကျန်းမာရေးအောင်မြင်စွာ ၀ိတ်ချ နိုင်သူများကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများအမျိုးသားများနှင့်ကျန်းမာရေးအမျိုးသမီးများနှင့်ကျန်းမာရေးကလေးများနှင့်ကျန်းမာရေးကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်ကျန်းမာရေးသက်ကြီးပိုင်းနှင့်ကျန်းမာရေးကျန်းမာရေး (A-Z)အသုံးများဆေးဝါးများတွဲဖက်မသောက်သုံး သင့်သောအစား အသောက်နှင့်ဆေးဝါးများအရေးပေါ်ကုသနည်းများဆရာဝန်ကြီးများ ၏ ဆောင်းပါးများဂျာနယ်များ၊ မဂ္ဂဇင်းများနှင့် သတင်းများ
Copyright © 2014 - 2019 Dr Myanmar. All Rights Reserved.
Site by Zino Tech.